FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELOOYINKA DIGIRTA CAGAARAN (KALOORIYE, SIFOOYIN FAA'IIDO LEH, KHILAAF) - GREEN BEAN
Ugu Weyn Ee Green Bean
Waa maxay digirta dhirta leh ee jirka
Green Bean - Tani waa dhaqanka reerka legume ee ka tirsan noocyada sonkorta. Digirta Asparagus waxay leeyihiin magacyo kale, sida cagaar, cagaar ama sonkor. Waxaa jira in ka badan 90 nooc oo dhaqanka ah, oo ka duwan wakhtiga ubax iyo qaabka inflorescences. In digirta digirta asparagus ma jiro lakabka maqaar, kaas oo kuu ogolaanaya inaad cunto dhammaan boogta oo dhan. Muuqaal muuqaal ah oo ka mid ah badeecadani waa in aysan ku dhajinaynin walxaha waxyeellada leh ee ka yimaada deegaanka, sida dalagyada kale ee khudradda.
Digirta Asparagus: Waxyaabaha kiimikada iyo qiimaha nafaqada
Marka la barbardhigo digirta duqsigu, koofiyadu ma aha mid hodan ku ah borotiinka, laakiin waxa ku jira fiitamiin badan oo ka badan kuwa kale. Digirta Asparagus waxay ku jirtaa fitamiinada ay ka kooban tahay (A, B, C, E), macdanta iyo walxaha raadraaca (birta, potassium, calcium, zinc, magnesium, iwm), iyo sidoo kale folic acid. Halabadani waxay ka dhigaysaa digirta kaliya maaha mid dhadhan fiican, laakiin sidoo kale wax soo saarka cuntada oo aad u muhiim ah. Qiimaha nafaqadu waa 47 kcal oo keliya 100 g: 2.8 g oo ah borotiinka, 0.4 g oo dufan ah, 8.4 g oo karbohidraat ah. Digirta istiraatiijiyadu waxay ka kooban tahay fiber ka yar tan kale, si dhakhso ah oo si fudud loo dheefshiido.
Ma taqaanaa? Wadanka digirta cagaaran waa Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika. Dadku waxa ay muddo dheer ogyihiin waxyaabo faa'iido leh iyo tayada nafaqada ee khudraddaas. Tusaale ahaan, Roomaanyadii qadiimiga ahaa maaha oo kaliya isticmaalka digirta wax lagu karsado, laakiin sidoo kale waxay u isticmaashaa alaabo qurxin - waxay diyaariyeen budada oo ah kuwo adag oo jilicsan oo maqaarka wejiga u jilicsan. Iyo quruxda quruxda Masar ee Cleopatra waxay samaysay waji maaskaro oo ah baro qalalan oo qoyan oo qoyan oo digir ah. Dhanka yurub, digirta ayaa ku soo baxay qarnigii XVI, markii ay maraakiibta yurubiyanku ka keeneen Koonfurta Ameerika. Wakhti yar ka dib, digirta ayaa ka muuqday Boqortooyada Ruushka, halkaas oo loo yaqaan "digir farans ah" waxaana loo isticmaalaa qurxinta beeraha iyo sariiraha ubaxa. Waxay bilaabeen inay cunaan cunto kaliya bilawgii qarnigii 18aad.
Waxyaalaha waxtarka leh ee digirta asparagus
Sababtoo ah faa iidada fitamiinada iyo macdanta, digirta dhirbaaxada waxay keenaysaa faa'iidooyin badan jirka jidhkiisa. Iyadoo la raacayo tallaabo wadajirka ah ee folic acid, magnesium iyo potassium, waxay ka caawisaa ka hortagga dhacdada wadnaha. Waxyaalaha ayaa ka qaybqaadanaya soo kabashada degdegga ah ee jirka inta lagu jiro SARS iyo laabotimismka. Maaddaama ay ka kooban tahay birta sare ee birta, taas oo kor u qaadaysa unugyada dhiigga cas, khudradda ayaa lagula talinayaa isticmaalka muddada dhiig-yaraanta. Faa'iidooyinka digirta asparagus ee jidhku waa, marka lagu daro dhammaan saameynta faa'iido leh ee nidaamka dareenka. Haysashada saamayn deg deg ah, khudradda waxaa loo isticmaalaa alaabta ka hortagga xanuunka: waxaa muddo dheer la arkay in dadka ku tiirsan digirta cagaaran ay u nugul yihiin oo ay leeyihiin hurdo caafimaad leh. Waxaa lagu muujiyey isticmaalka digirta iyo dadka qaba sonkorowga. Khudradda waxaa ku jira arginine, kaas oo u shaqeeya sida insulin, hoos u dhigidda heerka sonkorta dhiigga. Waxyaalaha daawada lagu durayo waa wax kale oo ka caawiya digirta asparagus. Waxay ka saartaa cusbada iyo dheecaanka xad-dhaafka ah ee jidhka, ka caawinta ka-hortagga turka iyo urolithiasis.
Sida loo isticmaalo digirta asparagus ee daaweynta xanuunka
Casparagus juice waa qalab aad u fiican si loo yareeyo cudur daran oo bursitis ah. Si aad uga takhalustid xanuunka kudubyada iyo jilicyada, qaad 150 g oo casiir ah oo casiir ah maalin kasta iyo dhowr jeer toddobaadkii waa inaad diyaarisaa suxuunta.
Waxaa jira cuntooyin isticmaalaya tubo qalalan oo caawinaya daaweynta nooca 2aad ee sonkorowga. Faa'iidooyinka digirta cagaaran ayaa ah inay hoos u dhigto heerka sonkorta oo waxay ka dhigeysaa barar ku yimaada bararta dadka qaba cudurka macaanka. Waxaad u baahan tahay inaad qaawiso 50 g oo ah pods qallalan oo qalalan, ku shub biyo karkaraya (400 ml) oo ku adkeyso habeenka. Ka dibna adkee oo cab 120 g 20 daqiiqo. ka hor cuntada. Waxa kale oo aad ku shubi kartaa afar qaado oo khudrado la jajabiyey leh litir biyo qabow oo ka baxsan 8-10 saacadood. Ka dibna adkee oo qaado 1 dhalo ka hor cunto.
Waxaa sidoo kale jira cuntooyin isku dhafan oo la isku darka ah ee la dagaallanka cudurka macaanka, sida caleemaha blueberry. Qoryaha digirta la qalajiyey iyo caleemaha bilberry (3 qaado) ku shub 0.5 litir oo biyo ah karkaraya, isku kari biyo kulul, qabow iyo jeermis laba saacadood. Cadaadisna qaado 120 g 15-20 daqiiqo ka hor intaadan cunin. Dadka qaba buurnaanta waa in ay ku jiraan digirta asparagus ee maalinlaha ah ee ay ku jiraan, beddelida suugada baradhada iyo baastada.
Isticmaalka digirta asparagus ee karinta
Digirta Asparag ayaa loo adeegsadaa karinta, waxaana si gaar ah loogu mahadcelinayaa kuwa daaweeya miisaankooda waxayna raacaan mabaadiida cunno caafimaad leh. Dhadhanka digirta asparagus waxaa ugu wanaagsan in la ilaaliyo haddii la kariyo ugu dambeyn saddex maalmood ka dib goosashada. Ku kaydi digirta cusub ee qaboojiyaha dhawr maalmood. Xilliga jiilaalka, waxaad sidoo kale xakameyn kartaa digirta, sidaas darteed waxay hayn doontaa dhamaan sifooyinka wanaagsan ee nafaqada leh, iyo dhadhanka ma waayi doono wax cusub. Digirta Asparagus waxaa loo diyaariyaa si gooni ah, sida saxar gooni ah, iyo waliba waxyaalo kale. Digirta la kariyey waxaa loo isticmaalaa saladh, maraq, ukunta qaxwada, caleemaha, suugada, iyo sidoo kale soodhada dhinaca hilibka, kalluunka iyo badda. Digirta yar yar ayaa la kariyaa si dhakhso ah - qiyaastii 5-6 daqiiqo, ma aha wax yaryar oo jilicsan ayaa wax yar kari doona (10 daqiiqo), sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin dhadhanka. Ka hor inta karinta, digirta waa in si wanaagsan loo dhaqo biyo qabow, jarjarey oo jarjar ama qeybo yar ama qaybo badan. Sidoo kale, kalluunka khibrada leh waxay kugula talinayaan in aad qoyso digirta cagaaran maalin ka hor intaan la karinin, si loo kabo qoyaanka lumay.
Waa muhiim! Marka aad wax karineyso, ma dhali kartid digirta asparagus, haddii kale waxaa laga yaabaa inay lumiso vitamiin iyo macdan.
Digirta Asparagus ayaa la kariyaa, la kariyo mashiinka qunyar-socodka ah, karsaaraya lammaan, shiil iyo dubi. Si aad u kariso qasacda beerka, waxaad u baahan tahay inaad ku shubtid digsi diirin qoto dheer 1 tbsp. l saliidda khudradda ee caanaha, ku dar basasha jarjaran, galaas oo maraq ah (qudaar, hilib, kalluun) kari ilaa 25 daqiiqo. Ugu dambeyntii ku dar subagga dhadhanka. Si aad u shiil garee digirta cagaaran, kuleylka leh saliidda khudradda leh kuleyl dhexdhexaad ah, geli digirta.
Salt iyo walaaq si joogto ah. Marka digirta ay jilicsan yihiin oo jilicsan yihiin, waxaad u baahan tahay inaad dabka qabsatid oo aad ku rushayso jiiska, jartey jarjaran iyo cagaarka la jarjaray. Waxaad samaysan kartaa saladh si sahlan oo dhakhso ah oo digir ah oo asparagus ah: karkari sheyga si sahlan oo leh shaah liin ah liin, saliidda qudaarta, cusbo iyo basbaas.
Waxay dhaawici kartaa isticmaalka digirta dhirta
Isticmaalka digirta cagaaran waxay faa'iido u leedahay waxayna leedahay saameyn faa'iido leh jirka, laakiin wax soo saarku wuxuu waxyeelayn karaa dadka qaarkood.. Uma isticmaali kartid digirta kuwa qaba xanuunka qanjirada raaga, gastric iyo duodenal, iyo sidoo kale colitis, cholecystitis. Laguma talin in lagu xadido digirta dadka waayeelka ah ee haysta dhibaatooyinka shaqada ee mindhicirka.
Hababka goosashada iyo kaydinta digirta asparagus
Si aad u ilaaliso cuntadan caafimaad iyo cuntadaba sida ugu dheer ee suurtogalka ah ama inaad soo qaadato digirta jiilaalku, waxaad ku ilaalin kartaa, soo qaad oo dib u dhig. Waxaa lagula talinayaa in lagu ilaaliyo dhalinyarada asparagus, sababtoo ah tayada ayaa ah, caafimaadkaaga iyo tastier waa. Baaskiilada noocan oo kale ah, waxaad u baahan tahay inaad jarjartid digirta 3 xabbo oo cm, hoos u dhig 5-6 daqiiqo. in karkaraya biyaha, isku laabo colander iyo faafin bangiyada, horey loo nadiifiyey. Diyaari marinade laga bilaabo 1 litir oo biyo ah iyo 50 g oo cusbo ah, ku shub qashinka digirta, ku dabool daboolka iyo nadiifin ku jira weel biyo ah karkar ahaan nus saac. Ka dib markaa, ku shub 1 qaado oo ah 80% oo khal qashin ah oo ku xir xiraha furaha. Si aad u kariso digirta cagaaran ee la kariyey ee xilliga jiilaalka, caleemaha qumbaha, basbaaska kulul, casaan, dhir udgoon, dhir udun dhadhan iyo cusbo cusbo ayaa loo baahan yahay, sida ku jirta qariidada hore.
Pods pre-kasoobaxa ilaa shan daqiiqo iyo daadi ee colander ah. In saxan kasta qoryo baxay caleen, dhir udgoono dhadhan, gabal gabal ah, xumbo, basbaas kulul, gelin digirta on top. Ka dibna ku shub karkariyo cusbo leh cusbeyn iyo nadiifin biyo karkaraya 5 daqiiqo. Ka dib markaa, xir xidhxidhka furaha zakazateny Waxaad xiri kartaa digirta dhirta. Haddii khatartu si sax ah loo sameeyo, digirta waxay ku xafidaan muuqaalka, qaabka iyo tayada waxtarka leh illaa xilliga xiga. Si loo diyaariyo digirta loogu talagalay barafka, waa lagama maarmaan in la gooyo darfaha iyo caws. Ka dib markaad biyo raacsan tahay oo qallalan oo qallalan, ku riix kari amaba xashiishad. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo bacaha nadiifinta ee gaarka ah ama weelasha hawada laga saaro si loo qaboojiyo. Sidaa daraadeed baaldiyada waxay yeelan doontaa qaab jajab ah oo si wanaagsan loo ilaaliyo. Ka dib markaad baakooyinka ku xirto, u dir digirta qaboojiyaha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Green Bean 2020